Ebe nrụọrụ weebụ a na-agwa gị ozi niile ọ maara banyere gị | Akụkọ akụrụngwa
Anyị amabeghị mkpa data anyị na ozi nkeonwe maka ụlọ ọrụ ndị ahụ niile na-eji ha ma resị ha ndị ọzọ iji gbanwere otu ọrụ anyị niile na-eji kwa ụbọchị. Ijikwa ekwentị na ọrụ WhatsApp, Facebook na Google pụtara ọtụtụ ihe karịa ọtụtụ na-eche, na nkeji nke ọ bụla anyị na-enye ọtụtụ ozi.
E mepee weebụsaịtị n'oge na-adịbeghị anya nke na-egosi gị na ihuenyo ozi niile ị na-anakọta otu ihe a gbasara gi. Ọ bụ ihe ijuanya, ebe ọ nwere ike ịmara mgbe a na-ebo ebubo laptọọpụ gị na pasent ole batrị ọ nwere, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nwere ekwentị gị n'aka gị. Nnwale weebụ dị mkpa ma dị mkpa nke ị ga-achọpụta n'ezie na ngwaọrụ ị na-eji kwa ụbọchị maara banyere gị karịa ka i chere.
Ojiji ị nyere laptọọpụ ma ọ bụ ama bụ ozi bara oke uru maka ụdị ọrụ, nyiwe na ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji laptọọpụ nke ị nwere Ana m arụ ọrụ mgbakwunye iji wepu mgbasa oziCompanieslọ ọrụ na-ere ahịa ga-amata na ha enweghị ike ịbịakwute gị site na mgbasa ozi a n'ụdị adwords, yabụ ha ga-eji ụzọ ndị ọzọ dịka SMS ma ọ bụ ozi ịntanetị iji nweta gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị chere na ị ga-ewepụ ya. Ma ọbụlagodi na ị chere na ị na-eme nchọgharị na nzuzo, kwụsị, ha ga-amata onye ị bụ.
Ihe atụ ọzọ bụ Ọnọdụ batrị nke zuru oke nke ọma ịkwado gị online ma jiri batrị API webatara na HTML5. Na-enye ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ohere ịhụ pasent nke batrị fọdụrụ na ngwaọrụ ahụ wee si otú a na-etinye nsụgharị ihe oriri dị ala na ngwa weebụ na ndị ọrụ. Ngwakọta nke batrị dị ka pasent na ndụ batrị n'onwe ya na sekọnd na-enye njikọta 14m, nke bụ n'onwe ya ihe nchọpụta pụrụ iche maka ngwaọrụ ọ bụla. N’ụzọ dị otu a, ha ‘ejidela’ gị otú ị ga-ekwu.
Webkay bụ webụsaịtị ị ga-eji amata ozi niile ha ma gbasara gị ekele usoro nke kaadị na ha na-akọwa data anakọtara nke ọma. Data dị ka ngwanrọ, ngwaike, ọnọdụ, njikọta, mgbasa ozi mmekọrịta, "Pịa Jacking" na ọtụtụ ndị ọzọ bụ otu nzọ ụkwụ na ịpị njikọ ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Lelee ihe nchọgharị weebụ gị maara banyere gị
Nke a bụ ndepụta nke smartwatches nke ga-enweta gam akporo Wear 2.0 na 2017